आफू अगाडी बढ्न नसकेको महसुस गरिरहनुभएको छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips आफू अगाडी बढ्न नसकेको महसुस गरिरहनुभएको छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय
आफू अगाडी बढ्न नसकेको महसुस गरिरहनुभएको छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय
हामीलाई थाहा छ, सफलता भनेको निरन्तरको यात्रा हो । कहिलेकाहीं हामीलाई आफू यो बिन्दुबाट अगाडी बढ्न सकिन , एकै ठाउँमा रहें भन्ने महसुस हुन्छ र यसैकारण कतिपय व्यक्ति निराशामा समेत जान्छन् ।
आफू अगाडी बढ्न नसकेको अनुभव गरिरहनुभएको छ ? अपनाउनुहोस् यी ५ उपाय
तपाईंको जागिर कस्तो छ ? तपाईं कुन पदमा रहेर काम गरिरहनुभएको छ ? तपाईं अहिलेको पदभन्दा माथि जाने ठाउँ छ ? के तपाईंले काममा नयाँ कुरा सिक्न पाइरहनुभएको छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुहोस् । यदि यी प्रश्नको उत्तर नकारात्मक पाउनुहुन्छ भने अर्को काम खोज्नुहोस् । जुन कामबाट तपाईं अगाडी बढ्न सक्नुहुन्छ, जुन कामलाई तपाईंले आफ्नो भविष्यसंग जोड्न सक्नुहुन्छ, त्यो काम गर्नुहोस् ।
चुनौतीहरु आएनन् भने मान्छे अगाडी बढ्न सक्दैन । त्यसैले चुनौतीहरुको सामना गर्नुहोस् । काम या पढाइमा चुनौती आएको छैन भने पनि आफैले चुनौती खडा गर्नुहोस् । सजिलो बाटो रोजेर कहीं पनि पुगिदैन । आफ्नो योजनालाई हेर्नुहोस् । तपाईंका योजना तथा लक्ष्य पूरा भए नभएको विचार गर्नुहोस् । त्यही अनुसार अबका लक्ष्य र योजना तय गर्नुहोस् ।
नयाँ कुरा सिक्न उत्सुक रहनुहोस् । नयाँ कुरासंग, समाचारहरुसंग अपडेट रहनुहोस् । आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा ध्यान दिनुहोस् । आफ्नो दैनिकीमा शारीरिक अभ्यास, मनोरंजन, अध्ययनलाई समावेश गर्नुहोस् ।
आफ्नो कामसंग सम्बन्धित र आफूलाई अगाडी बढ्न सहयोग गर्न सक्ने मानिसहरुसंग सम्बन्ध बढाउनुहोस् । त्यस्ता मानिसहरुसंग नेटवर्क विस्तार गर्नुहोस् । सभा सेमिनारहरुमा सहभागी भएर सहभागीहरुसंग सम्बन्ध बढाउनुहोस् ।
सामाजिक संजालमा आफ्नो पढाइ, आफ्नो काम तथा सामाजिक घटनाक्रमसंग सम्बन्धित आफ्ना विचारहरु पोस्ट गर्नुहोस् । सामाजिक संजाललाई सामन्य कुराकानीभन्दा बढी विचारको आदानप्रदान, नयाँ कुराहरुको जानकारी, नेटवर्क विस्तारको लागि प्रयोग गर्नुहोस् ।
Previousमदर टेरेसाका प्रसिद्ध भनाइहरु
Nextविश्वप्रसिद्ध कवि रुमीका प्रेरक भनाइहरु